Raw Estradiol powder (50-28-2) hplc =98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Estradiol upfu
Rating: SKU: 50-28-2. Category: Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gramu kusvika kuhuwandu hweEstradiol powder (50-28-2), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano hwehutano.
Estradiol isiri yeestrogen, inomukadzi weshure yekodhi yakakonzerwa nemaovha. Estrogen inofanirwa kumabasa akawanda mumuviri. Iyi mishonga ihomoni yevakadzi. Inoshandiswa nevakadzi kuti vabatsire kuderedza zviratidzo zvekuenda kumwedzi (zvakadai sekupisa kunopisa, kuomeswa kwemudzimai). Zviratidzo izvi zvinokonzerwa nemuviri unoita zvishoma eserogen.
Molecular Kurema: 272.38
Melt Point: 173 kusvika 179 ° C
Raw Estradiol powder kushandiswa mu steroid cycle
Estradiol (CAS 50-28-2) (E2), zvakare inopereterwa oestradiol, isteroid, isrogen, uye yekutanga mahormone echikadzi echikadzi.
Tora isradioleri sezvazvakanyorerwa iwe. Tevera mazano ose pamusoro pepavara rako rerapa. Usatora mushonga uyu muhomwe huru kana shoma kana kwenguva yakareba kupfuura yakakurudzirwa.
Iwe haufaniri kushandisa isradiol kana iwe une: chirwere cheropa, chirwere chekubuda ropa, kusabuda kwechikadzi chisina kujairika, nhoroondo yekenza-inotarisana nekenza (yakadai sezamu, uterine, ovarian, kana kenza yekameti), kana kuti iwe wakambove nehope yepfungwa , kurohwa, kana ropa.
Raw Estradiol powder mirayiridzo
Mimwe mishonga inogona kuwirirana ne-estradiol, kusanganisira mishonga yepamusoro uye inopfuura-the-counter, mavitamini, nemishonga yemishonga. Udza mumwe nomumwe wevatano vako vehutano nezvemishonga yaunoshandisa iye zvino uye chero mushonga unotanga kana kumisa kushandisa.
Urongwa uhwu hauna kukwana uye mamwe mishonga inogona kuwirirana ne estradiol. Udza chiremba wako nezvemishonga yose yaunoshandisa. Izvi zvinosanganisira mishonga, pane-the-counter, vitamini, nemishonga yemishonga. Usatanga mishonga mutsva usingatauri chiremba wako.
Kutenga Estradiol powder (CAS 50-28-2) kubva kuAASraw